Gudoomiyaha degmada Fagersta oo Soomaalida u sheegay in ay qaataan masuuliyada reerahooda | Somaliska
Gudoomiyaha degmada Fagersta Stig Henriksson ayaa soo galootiga magaaladiisa ku nool qaasatan Soomaalida u sheegay in ay reerahooda masuul ka noqdaan ka dib cabasho ay soo jeediyeen qaar ka mid ah Soomaalida oo ka cabanaya guryo la’aanta ku soo korortay magaalada.
Stig Henriksson ayaa warqad uu ku qoray bogga wargeyska Fagersta-Posten waxa uu sheegay in Sweden ay ku yaalaan 289 kommun oo qofkii guri ka waaya Fagersta uu meel kale ka raadsado. Gudoomiyaha degmada oo ka jawaabayay cabasho ay soo jeediyeen qaar ka mid dadka oo sheegay in kamuunka uusan daryeelin xaga guryaha ayuu sheegay in kamuunku uusan xalin karin dhibaatooyinka dadka oo dhan haddii ay Swedish yihiin iyo haddii ay soo galooti yihiinba.
Waxa uu sheegay in dhaqan kasta dadka waaweyn ay masuuliyada nolashooda ay qaadaan, sidaa darteedna dadka cabanaya ay masuuliyada iska saaraaan sidii ay ku xalin lahaayeen dhibaatooyinkooda iyo sidii ay u qaadi lahaayeen masuuliyada reerahooda.
Gudoomiyaha Fagersta oo ka mid ah dadka soo dhaweeya soo galootiga, ayaa hadalkaan kulul waxaa ka keenay ka dib markii ay magaalada ka taagneyd xiisad ku saabsan dadka cusub oo reerahooda loo keenay oo qaar badan ay deganyihiin guryo ciriiri ah kuwaasoo ay cabasho ka muujiyeen shirkadaha guryaha leh oo sheegaya in dad fara badan isku guri deganyihiin.
Arinta uusan ka hadlin Stig Henriksson ayaa ah in kamuun kasta oo Sweden ku yaala ay ka jiraan dhibaatooyin la mid ah kuwa ka jira fagersta. Dadka cusub ayaa lagu xiraa shuruudo badan oo aysan ka bixi karin, taasoo ay keentay sharciyada qalafsan ee ay dajiyeen siyaasiyiinta uu isagu ka midyahay.